Amin'ny maha-Premier Stainless vy surface mpamorona ao Shina, Foshan Hermes (Hengmei) Steel Co., Ltd naorina tamin'ny 2006, izay miezaka ny Stainless vy ny fanavaozana sy ny kalitao ho an'ny mihoatra ny 10 taona. Hatreto, efa lasa ho any amin'ny malalaka Integrated orinasa ny Stainless vy ny famolavolana ara-nofo, fanodinana.
Ary Hermes (Hengmei) Steel manana laza tsara eo amin'ny firenena maro.
India: Nanomboka ny famatsiana ny tsena India hatramin'ny taona 2010. Ankehitriny isika dia manana laza tsara ao Mumbai, Chennai sy Delhi, maro ny mpanjifa tia Hermes kalitao.
Afovoany Atsinanana: Ny fivarotana ny ekipa matihanina ezaka, ankehitriny isika dia nanangona bebe kokoa ny mpanjifa. Mpanjifa rehetra efa lasa naman'i Hermes Steel.
Ny mpanao mari-trano sy ny mpamorona lehibe indrindra manerana izao tontolo izao mifidy Hermes Steel toy ny tsara indrindra ho an'ny mpiara-miombon'antoka ny tetikasany! Contact us, hoavy mamirapiratra an'ny antsika!